AmaWisile akhumbule iJune 16 ngomngcelele | Ilisolezwe
AmaWisile akhumbule iJune 16 ngomngcelele
Iindaba / 16 June 2017, 10:02pm / Sithandiwe Velaphi no-Abongile Ginya
AmaWisile kwisekethe yaseMonti ebambe umngcelele eMdantsane ngosuku lolutsha UMFANEKISO: SITHANDIWE VELAPHI
Abantu bemamele iimfundiso ngemvelaphi yosuku lolutsha kwityalike iPentecostal Christian Fellowship kwa-N.U. 1 eMdantsane UMFANEKISO: SITHANDIWE VELAPHI
Ityalike yamaWisile kwisekethe yaseMonti ikhumbule usuku lolutsha ngoLwesihlanu ngokubamba umngcelele othathe into engaphaya kweyure besuka kwityalike yale nkonzo kwaNondlwana e-N.U. 8 besingise kwisikhululo samapolisa iVulindlela kwa-N.U. 12.
Lo mngcelele, obuququzelelwe yisekethe 314, ubuzinyaswe ngamalungu ale tyalike ephelekwa ngabafundi. Ilizwi beli linye, lisithi kwanele ngokudlwengulwa nokubulawa koomama neentsana.
Ubuthe chu umngcelele, uzolile ukhatshwa yingoma, umpampampa nentsimbi ekhenkcezayo. Hayi ke amaWisile ale sekethe ngengoma!
Ziliqela iziganeko zokudlwengulwa nokubulawa kwabantwana eMdantsane, nto leyo ebangela uloyiko kumakhosikazi nabantwana bale lokishi.
Ekufikeni kwabo eVulindlela, badlulise uxwebhu lwezikhalazo olufundwe nguMfundisi Luxolo Mselana. UMselana uxelele I’solezwe ukuba bagqibe ngelokubamba lo mngcelele ngenxa yokuba novelwano kukubulawa nokudlwengulwa kwabantwana noomama.
“Sicela amapolisa akhawuleze asabele xa engenelwa ngumnxeba omalunga nodushe okanye ulwaphulo-mthetho olujoliswe ebantwaneni nakoomama. Iyasihlupha futhi yenza sixhalabe into yokubona amatyala engafumani kuphandwa ngokwaneleyo ngenxa yokuba kusithiwa akukho bungqina, abe wona amaxhoba ephela ngumvandedwa,” utshilo uMselana.
Ephendula kwezi zikhalazo, inkumanda yesikhululo saseVulindlela uLieutenant Colonel Monde Mgolodela, uthe uzakuphendula koku zingaphelanga iiveki ezimbini.
“Ndiyavuya ukubona inkonzo ixhalabile ngezehlo zolwaphulo-mthetho kule ndawo yethu. Liyinene elokuba zithande ukuxhomisa amehlo izehlo zodlwengulo nokubulawa kwabantwana noomama.
“Abona bantu bangamaxhoba kakhulu lulutsha. Siyazama ukuwulwa lo mkhuba, kodwa siyathemba ukuba xa kukho abantu abaxhalabileyo abafana nani [amaWisile] izinto zizakutshintsha,” utshilo uMgolodela.
Ukanti nayo ityalike iPentecostal Christian Fellowship kwa-N.U. 1, ibambisene neKomishini yamaLungelo oLuntu, ithe yabamba owayo umngcelele ochasene nokudlwengulwa kwanokubulawa kwabantwana noomama.
UMfundisi uMxolisi Papu wePentecostal Christian Fellowship uthe: “Ubundlobongela kubantwana nakoomama buya buqatsela kweli lizwe, kwaye ezi zehlo zenzeka kwiindawo esihlala kuzo. Senze eli khwelo sisithi sichasene nobu bundlobongela.”